राजनीतिक दलले पूर्वराजासँग के सहमती गरेको थियो ?
राजनीतिक दलले पूर्वराजासँग के सहमती गरेको थियो ?
काठमाडौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मिडियामा त्यती आउँदैनन् । राजा हुँदाको समयमाभन्दा अलि मिडियामैत्री भएपनि उनी अझै त्यती बोल्दैनन् ।
तर कहिलेकाही उनले देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्छन् । नयाँ वर्ष, दशैं जस्ता अवसरमा जारी गर्ने सन्देशमा उनले शुभकामनासँगसँगै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । दशैंको शुभकामना सन्देशमा उनले शुभकामनाभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । जनताहरु असुरक्षित रहेको उनको आशय थियो । जनभावनाअनुसार काम गर्न सन्देश दिएका थिए ।
उनले बेला बेलामा आफूसँग राजनीतिक दलले गरेको सहमती कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । जनआन्दोलनपछि ज्ञानेन्द्रले नेपालको राजगद्धी छाडेका थिए । उनले आफैले मिडियासामु जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको उद्घोष गरेका थिए ।
उनले यसरी सजिलै गद्धी छाड्नुका पछि घुमाइफिराई पुनः राजसंस्था स्थापनाको आश्वासन कारक थियो पनि भनिएको छ । तात्कालिन जनआक्रोशलाई शान्त गर्न गद्धी सुम्पन लगाउने र पछि पुनः गद्धी फर्काइदिने भनेर राजनीतिक दलका नेताले आश्वासन दिएका थिए भन्ने हल्लासमेत नभएका होइनन् । तर ती हल्लाहरुमा वास्तविकताको अंश भने कमै पाइन्छ ।
यस्तै उनले दशैंको अवसरमा उनले सर्वसाधारणलाई टिका लगाइदिँदै पुनः यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पूर्वराजाले आग्रह गरेका छन् ।
शान्त, सुखी र समृद्ध मुलुक बन्ने आशामा आफूले अभिभाज्य मुलुक र सद्भावपूर्ण राष्ट्रिय एकताका लागि सहमति गरेको बताउँदै त्यो पूरा नभएका तर्फ राजनीतिक नेतृत्वको पुनः ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनको यो अभिव्यक्तिले आफूसँगको सहमती हल्ला र प्रचारमा आएभन्दा फरक रहेको संकेत गर्छ । गद्धी त्याग गर्दै गर्दा उनले राजनीतिक दलसँग त्यस्तो केही सहमती गरेको खबरहरु बाहिर आएका थिएनन् । त्यसैले कुनै गम्भीर सहमती भएको शंका गर्ने ठाउँ त्यती छैन । तर पनि पूर्वराजाले आफूसँग सहमती भएको भनिरहँदा त्यो सहमती के थियो, र कसले गरेको थियो भन्ने चासो आम मानिसमा छ ।